Uri pano:Musha > Products > Architectural Mesh > Marudi>Chainmail
Kechi yechichenaIri rudzi rwechitenda chesimbi chakakurumbira uye chinoshanda mumusika. Zvinhu zvacho zvinodokuva zvimwe chetezvo nekheteni yemvura. Zviuru zvakawanda zvezviringi zvinobatanidza pamwe chete kuti zvive nechitenda chikuru. Uye kedzanwa rinochinjika inogona kushandiswa nenzira dzakasiyana - siyana: yakamonyeswa, yakaomeswa, yakareba kana kuti yakaoma, ichiri chakanaka pasina kugadziriswa. Mupfungwa younyanzvi, ine simba rakakwirira rinogona kukurira nhamo huru. Cheinmail kedara yakazivikanwa navatengi vakawanda zvikuru, pane rumwe rutivi, zvinhu zvazvo zvakaisvonaka zvakafanana nesimba rakakwirira uye kudzivisa ngura kuva nechokwadi chokuva nenguva yebasa refu kupfuura kechidenga chairo, kune rumwe rutivi, ine chitarisiko chakanaka nechibatsiro chiduku chokuchengeta icho chinogona kushandiswa sechishongedzo chomukati nechokunze, Rusvingo rwekhenda, kurapwa kwamawindo, kushongedzwa kwerambi, zvimwe.
Cheinmail kedara inozivikanwawo sezvinochengetedza.
CMC-01 Chainmail Curtain Chirepo Chino Kuzaruka Akasiana
LZita rezvigadzirwa: kedaro.
LMashoko: 304/316 simbi risina simba, aluminium, chisimbi chekarvanized kana kuti carbon simbi.
LKurapwa kwomusoro: anodic oxidation.
LRuvara: sirivha, ndarama, mhura kana kuti ruvara rwomuzvarirwo. Mamwe mavara anowanikwawo.
LMhizha: 0,5 mm - 2 mm.
LMhuriro: 3 mm - 22 mm.
LInterface yerindo: yakaiswa kana kuti isina kukwanisa.
LUremu: 5 kg / m2 - 7 kg / m2 (zvinoenderana noukuru hweperture, chimiro nezvinhu zvakasarudzwa).
LKureba & Kukwirira: kusvika newe.
CMC-02 Golden chainmail kuyera kwechiyero.
CMC-03 Silver chainmail kuyera kwamapuro.
LSimba rakakwirira: Zvinhu zvaro zvesimbi zvinogovera kudzivisa uye zvinhu zvinorwisana nezvishoma.
LKugadzira zviri nyore: chivako chinochinjika uye chakagadzika, pasina kuderera kana kuti kubudisa kana kushandiswa.
LChibvumikiso chenheni: Kunyange mumamiriro ezvinyoro, kedzani richava rakanaka.
LKudzivirirwa kwomwoto: Nzvimbo yokuungana yeketeni yakakwirira zvikuru kupfuura keketa recheka.
LKushandiswa kwemhepo nokuchengeta:Chengeta mhepo yakachena mukati ndokuwedzera chiedza.
LKuchengeta zvinhu zvakaderera: Zvinhu zvinogona kugekwa nemvura yesipo.
LZvinogara kwenguva refu: Nebetsero dzokurwisana nengura uye pasina kuderera, nhengo inopa basa refu.
LChitarisiko chakaisvonaka: zvinhu zvakanaka uye zvakagadzirwa zvakanaka.
CMC-04 Chainmail kedara ine chivako chinochinjika zvikurusa
Keredi inogona kushandiswa nokuda kwokushongedza pamwe chete nokudzivirira. Inogona kushandiswa se:
LKushongedzwa kwomukati nekwokunze.
LMukamurani kana kuti kushongedzwa kwemamiriro ezvinhu.
CMC-06 Chainmail kedara inoshandiswa sokukamura mukari
Mabasa:Sokuona kwatinogona kuona, kedati ine mabasa akawanda kwazvo, naizvozvo inogona kushandiswa nokuda kwevakasiyana - siyana
LIsa kedenga romutsa mubhegi repurasitiki rakasimbiswa, ipapo mabhegi epurasitiki akasimbiswa mumakatoni kana kuti zvinhu zvemiti mukuwirirana nezvinodikanwa zvako.
LChetei ine mapepa anoratidza mvura kana kuti firimu yepurasitiki mukati nomukunze namabhokisi emabhokini kana kuti zvinhu zvaunokumbira ..
Kazhinji kazhinji, kedati inoiswa nehasi risina simbi kana kuti nhare yealuminium. Tarira yeAluminium alloy ine U track neH track. Vose vari vaviri gadziriro yechitendero chinochinjika zvikuru iyo iri mhinduro yakanaka yemadziro eheni, kurapwa kwamawindo. Uye tsvimbo yensimbi isina simba inoita kuti zvive nyore kufamba zvakanaka, zvinhu zvayo zvokutakura zvakakwana, zvakakodzera zvikuru nokuda kwekhetenin refu neyehevy metal. Nokuda kwemvura yealuminium alloy, irumbira kedeni racho rimwe chete uye shandisa zvimwe zvinhu kugadzira nzira iri pamadziro. Nokuda kwetsvimbo yesimbi isina simba, zvinongobatanidza chejira yechetsi, nayo nemheni duku dzesimbi, ndokuisa tsvimbo yejira parusvingo.
Mifananidzo inoratidzira yokuisa chikarakadzi yeCainmail.
Mbiri:Mashoko eGirazi Akaderedzwa
Taga: chainmail curtain, ring mesh curtain, architectural ring mesh,
Chii chiri kushandiswa zvikuru kwekheteni yechinji?
Chainmail Chitarisiko Chinoita Nokunzwa Kwefashoni Yamazuva Ano
Kusarudza ruvara rwevara rwechitendati
Muchinji Mhizha Inoshongedza Gari Rako Nehofisi Rako
Chitarisiko Chinoita Muchinji Nechinzwa Chefashi Yemazuva Ano